Xaaladda magaalada Buuhoodle oo saaka deggan & dareen cabsiyeed oo laga qabo dagaal mar kale dhaca. – Radio Daljir
Xaaladda magaalada Buuhoodle oo saaka deggan & dareen cabsiyeed oo laga qabo dagaal mar kale dhaca.
Maajo 22, 2010 12:00 b 0
Buuhoodle, May 22 ? Xaaladda magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ee maamulka Puntland ayaa saaka deggan kaddib markii maalintii shalay ahayd uu halkaasi ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeyey ciidamo Ethiopian iyo dadka deegaanka Buuhoodle.
Degganaansha saaka laga dareemayo magaalada Buuhoodle ayaa ka danbeeyey kaddib markii odayaasha dhaqanka ee degmadaasi Buuhoodle iyo waxgarad aad u tiro badani illaa xalay ay ku hawllanaayeen sidii xiisadda loo qaboojin lahaa iyagoo ciidamada Ethiopian ah iyo shacabkii la dagaallamayey ka codsaday in xabadda la joojiyo xaaladdana lagu soo dabbaalo mid nabadeed.
Ka sokow degganaansha saaka laga dareemay magaalada Buuhoodle waxaa dhinac socda cabsi aad u weyn oo ay dadweynuhu ka qabaan dagaal mar kale halkaaasi ka dhaca, waxaana magaalada saaka laga dareemayey qax ay dadweynuhu samaynayeen iyagoo u cararayey deegaannada ka baxsan degmada Buuhoodle.
Dagaalkii shalay ee u dhaxeeyey ciidamada Ethiopian ah ee degmadaasi Buuhoodle dhawaan soo degay iyo dadweynaha magaalada ayaa gaystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kaddib markii labada dhinacba ay isku adeegsadeen qoryaha daran-dooriga u dhaca., dagaalkaasi oo muddo saacado badan ah soconayey.
Inta la xaqiijiyey 10 qof oo shacabka reer Buuhoodle ah ayaa dagaalkaasi ku dhintay halka tiro ka badan 20 kale oo ka mid dadka rayidka ah ee Buuhoodlena ay ku dhaawacmeen.
Dhanka ciidamada Ethiopian ah ayaa la sheegayaa in ay ka dhinteen illaa 3 Askari kuwaasi oo ku nafwaayey dagaalkii shalay halka tiro intaasi ka badanna ay soo gaareen dhaawacyo rasaaseed, waxaana jira warar kuwaasi ka madax bannaan oo sheegaya tirada dhimasho iyo midda dhaawac ee askarta Ethiopia-ku in ay intaasi ka badan yihiin.
Dagaalkaan ayaa ka danbeeyey kaddib markii ciidamada Ethiopian ah ee soo dul-degay degmadaasi Buuhoodle ay xirxireen gaadiid aad u tiro badan oo dadka deegaanka Buuhoodle ay lahaayeen, kuwaasi oo u badnaa baabuuta xamuulka qaada, waxaana ay xabaddu bilaabatay kaddib markii lagu guul-darraystay isku dayo lagu damacsanaa in gaadiidkaasi lagu fasaxo taas oo ay wadeen odayaasha deegaanku.
Maamulka Puntland ayaa dagaalkaasi ku tilmaamay in uu yahay mid ayaan darro ah oo aan loo baahnayn, dhaawacna u gaysan kara xiriirkii wanaagsanaa ee u dhaxeeyey Puntland iyo dawladda Ethiopia, waxaana Puntland ay ka codsaday dawladda Ethiopia in ay ciidamadeeda kala baxdo deegaanka Buuhoodle si xaaladda loo dejiyo.
Waa markii ugu horraysay oo dagaal noocaan oo kale ah uu ka dhaco magaalada Buuhoodle wixii ka danbeeyey sannadihii sagaashameeyadii oo dagaal kan la mid ah una dhaxeeyey shacabka iyo ciidamo Ethiopian ah uu ka dhacay halkaasi, waxaana uu ku soo beegmayaa xilli dhawaan ay halkaasi ka soo laabteen wafti heer xukuumadeed ah oo ka tirsan maamulka Puntland muddana Buuhoodle ku sugnaa.
Dawlada Puntland oo sheegtay in dagaalkii ka dhacay Buuhoodle aanu ahayn mid siyaasadeed, balse ku yimid jawi & cimilo aan la filayn.